37 37 गर्भावस्थाले बच्चा जन्माउने गर्भावस्थाको plays 37 हप्तामा के भइरहेको छ भनेर पूर्वानुमान गर्ने गर्भावस्थाको पूर्वानुमान गर्दैछ, पूर्वमा
गर्भावस्थाको th 37 औं दिनमा, बच्चाको बृद्धि लगभग 48 48 सेन्टीमिटर र यसको तौल हो - फर्मेन्स्टिन्सले, कार्टिलियन कपडाहरूको विकास भएको छ, कार्टिलियन कपडाहरू उच्चारण गरिएका छन्। गर्भावस्थाको यस्तो अवधिमा subcuteous फ्याटको संचयले शरीरको बाहिरी भागहरू नरम र गोल गर्यो। बच्चाको छाला बिस्तारै धुम्रपालन हुन्छ, यो अब गुलाबीको रूपमा छैन, जुन अघिल्लो हप्तामा अन्तर्वार्ताको विकासमा गरिन्छ, कभरहरू बिस्तारै उज्यालो हुन्छन्।
यस अवधिमा वर्गको मात्रा मात्र नभई मांसपेशी र कंकालहरूको मात्रा मात्र गहन रूपमा विकसित भएको छ। बच्चा लगातार ह्यान्डल र खुट्टाको साथ सार्दछ। यी विशिष्ट कसरतले मांसपेशीको द्रव्यमानलाई बढाउन योगदान गर्दछ। बच्चाले पनि लयबद्ध श्वसन आन्दोलन गर्दछ जसले अन्तरस्टास्टल मांसपेशीहरू र एक डायाफ्राग्रामलाई सुदृढ पार्छ, बच्चा जन्माईको लागि सास फेर्न अंगहरू।
गर्भवती महिला हप्तामा
बच्चा जन्माउनुको आपत्तिको साथ, गर्भवती महिलाहरूले उनीहरूको प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति मनाउन थाल्छ, जुन केही संकेतहरू, परिवर्तनहरू छन् जुन त्यस्तै प्रकारका हर्मोनको प्रभावमा हुन्छन्। एक महिलाको निकायले बच्चालाई जन्माउन तयारी गर्दैछ, प्रोसेस्टोन एस्ट्रोनको हर्मोनको प्रमुख भूमिकाको तुलनामा निकृष्ट छ, गर्भवती भएको हितमा परिवर्तन भइरहेको छ।
कुर्सीको चरित्र परिवर्तन हुँदैछ, यो स्वभाव छ, विभिन्न तीव्रताहरूको तल्लो पछाडि, गर्भाशयको तल कम हुन्छ। केहि संकेत महिला नोटहरु स्वतन्त्र रूपमा, अरुले एक योजनाबद्ध निरीक्षणको बेला स्त्री रोग विशेषज्ञ अवलोकन गर्छन्।
प्रिडर्टरहरू सबै महिलामा देखा पर्दैनन्। भविष्यका कोही आमाहरू केवल माथिका केहि लक्षणहरू मात्र चिह्नित गर्छन्, अरूले आफ्नो मिति भन्दा दुई वा तीन हप्ताको बारेमा नभई केही घण्टामा हैन। And 37 औं हप्तामा जनताको उपस्थितिको रूपमा, र तिनीहरूको अनुपस्थिति मान्यताको विकल्प हो र एक महिलाको शरीरको व्यक्तिगत विशेषताहरूमा निर्भर गर्दछ।
गर्भावस्थाको हप्ता: भविष्यको बच्चाको विकास
बच्चा जन्म गर्भावस्थाको 37 37 हप्ताको 37 37 हप्ता - यति विरलै छैन। तथ्या .्कका अनुसार, 10% सम्म बच्चाहरूको 1% सम्म बच्चाहरूको प्रकाशमा देखा पर्दछ, र अधिक बच्चाहरू पनि पूर्ण 37 37 हप्तामा जन्मन्छन्।
गर्भावस्थाको 37 37 वटा हप्ताको दृष्टिकोणको दृष्टिकोण धेरै र धेरै अस्पष्ट छ। यो तथ्य यो छ कि शब्द सीमा हो।
<< p8 जन्महरू जुन -3 36--37 हप्तामा समयपूर्व, र बच्चा जन्माइएको छ perce 37 पूर्ण हप्ताहरू र धेरै दिन पहिले नै सामान्य, जरुरी हो।
त्यसैले, यो अवधि अब यति महत्त्वपूर्ण छ कि कति सही रूपमा गर्भधारण अवधि निर्धारित गर्दछ। पहिलो स्थान बच्चा आफैंको परिपक्वताको डिग्री हो।
जन्म दिनको स्थापना भएको दिनको स्थापना भएको, यो प्राय: एक महिना बाँकी छ, र यो तथ्यले आप्रवासनहरूको भयानकहरूको बारेमा धेरै डराउँछ।
यदि भ्रुणको मोर्फिलोजिकल अपरिज्ञान अपरिक्षिकता, तौल र यसको विकासको डिग्री भविष्यको लागि यसको विकासको पूर्वाधार निर्माण गर्न अनुमति दिइनेछ।
पाठ्यक्रम, किनकि बच्चाको लागि करीव 400 हप्तासम्म, अन्तिम रिसोर्टको रूपमा, जो अन्तिम दिनहरू, किनकि यी अन्तिम दिनहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन् - बच्चाले subcutanhous सूटिको बृद्धिको कारण वजन बढाउँदछ र सर्फरनको फोक्सोमा जम्मा हुन्छ।
पहिलो कारक महत्त्वपूर्ण छ किनकि बच्चाले गर्मीलाई कुनै समस्याबिना तातो रहन सक्षम हुन सक्छ, र दोस्रो स्वतन्त्र श्वासप्रश्वासको लागि हो, किनभने कन्टेननन विकासको बखत बच्चाले सास फेर्दैन, पाउँदा, बच्चाले सास फेर्दैन, पाउँदिन मातृ रगतबाट अक्सिजन।
यो विश्वास गरिन्छ कि यसको चूसी गर्भावस्थाको रकम गर्भावस्थामा पूर्ण 39 weeks हप्तामा पुग्छ। तसर्थ, दुई हप्ता अघि जन्म, अवश्य पनि जोखिमपूर्ण, तर यति धेरै छैन कि बच्चाको बचत गर्न को लागी। धेरै जसो केसहरूमा, सबै कुरा सुरक्षित रूपमा पूरा हुन्छ।
37 37 औं एक हर्षोस्ट्रीको ओबस्ट्रन्ट्ट्री हप्ता बच्चाको जन्म आउँदैछ। तपाईंले पूर्ण रूपमा महसुस गर्नुपर्दछ कि पेटमा months महिना जिउँदो जीवन बिताइरहेका छन्। र यस लामो प्रतीक्षा गरिएको बिन्दुको लागि तयार हुनुहोस्। मेडिकल डेटाका अनुसार गर्भावस्थाको 37 37 हप्ता गर्भावस्थामा बच्चालाई डकिंग भनिन्छ त्यो क्षण हो।
जुम्ल्याहाहरू प्रायः यस हप्ता जन्माइन्छ, र यदि बच्चाको दोस्रो, तेस्रो आमा आदि छ भने। खातामा। तर जेठो सन्तानहरू 400 भन्दा अलि अलि पहिले जन्मन सकिन्छ। उहाँ गर्भ बाहिरको जीवनको लागि तयार हुनुहुन्छ। तर बच्चा जन्माउने कारणले आफैंले प्रकाशमा देखा पर्न सक्दैन, यो खतरनाक हुन सक्छ!
अब बच्चाको शव गुहाको रूपमा गठन भएको छ र यसले तौल प्राप्त गर्दछ। नियमको रूपमा, जुम्ल्याहा कम तौल कम हुन्छ। बच्चालाई डकिंग भन्न सकिन्छ। आमाको केहि काममा उनको प्रतिक्रिया पहिले नै ध्यान दिन सकिन्छ। र तपाईं उहाँलाई जस्तो मन पराउनुहुन्छ, र नकारात्मक भावनाहरू के हुन्छ।
प्लेन्सेसा केवल 37 37 ओडस्टेट्रोट्रिकहरूमा बुढो सुरु हुन्छ। निस्सन्देह, यसको मतलब यो हो कि बच्चाले अब अक्सिजनको रूपमा पौष्टिक तत्त्वहरूको सानो मात्रा प्राप्त गर्दछ। तर यसको फोक्सो पहिले नै विकसित छन्, तिनीहरूलाई रक्त आपूर्ति प्रणालीमा मात्र अहिले सम्मिलित हुँदैन। जन्मको समयमा, यसलाई सच्याइनेछ, भल्वले फोक्सोमा रगत बग्न खोल्नेछ।
हर्मोन "कोर्सिनिजन" ले श्वासप्रश्वास प्रणाली पूर्ण रूपमा विकसित भएको छ। र क्रुम्बले श्वासप्रश्वासको चालहरू बनाउँदछ र निल्न कोसिस गर्दछ। थप रूपमा, बच्चाको मृत्यु र दृष्टि र दृष्टिकोण छ। फलले पहिले नै बुझ्दछ र प्रियजनहरूको आवाज छुट्याउन सक्छ। उसको लागि मादर आवाज एक विशेष खुशी छ। उसलाई संगीत र गीतहरू थाहा छ।
पाचन प्रणाली पहिले नै सक्रिय छ। मस्तिष्कले आन्दोलनहरूको समन्वय विकास गर्ने प्रक्रिया सुरू गर्यो। खैर, यो प्रक्रिया एक वर्ष भित्र काम गर्दछ। साथै, मस्तिष्कको काम बढी सम्मानित छ। रिफ्फक्स स्थिर, अधिक चुहावट भयो। T. बच्चा त निद्रामा परेको छ, वा औंला बेकार छ, जसले यसलाई स्तनपानको लागि तयार गर्दछ।
37 37 हप्ता गर्भावस्थाको उपस्थितिमा यसले बच्चाको उपस्थितिलाई असर गर्छ। अधिक skbby गालाहरु को अतिरिक्त, यस हप्ताको लागि, बच्चाको टाउको एक ठूलो रकमले ढाकिएको छ। तिनीहरू बढ्दै र चिह्नित, तिनीहरू औंलाहरूको सीमा बाहिर जान्छन्, जसको मतलबले आफैलाई स्क्र्याच गर्न सक्दछ।
crumbs को टाउको जन्म दिन को लागी यो जन्मदिनको मार्गहरु को माध्यम बाट जान सजिलो बनाउन को लागी। उनीहरूको सील नाक र कान जारी राख्नुहोस्। तिनीहरू पहिले नै हप्ताको अन्त्यबाट पूर्ण रूपमा गठन भैसकेका छन्।
<< औं हप्तामा, केटाहरूसँग अण्डाहरू पहिले नै अण्डोरममा खसाल्दै, जननेन्द्वी प्रणालीको विकास हुन्छ। अल्ट्रासाउन्डको माध्यमबाट, एक आमा बुबाको सुविधाहरू कहिलेकाँही ट्रस्ट हुन्छन्।
ïðèäèÒ 3òÒ33 3ñååååååòòòòòòò òèèè ई ââââââââââââââââââââââââââòòòòòòòòòÒèòòòòò ऊ हे èèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè Ûûûûû âûûûûû âûûûûû âââ âììììììììì à à à à û û û Ïðåæäåâðåìåííûìè îíè ñ ÷ èòàòüñÿ IA áóäóò, òàê êàê द्वितीय ìåäèöèíñêèì ïîêàçàòåëÿì áåðåìåííîñòü ñ ÷ èòàåòñÿ óæå äîíîøåííîé, åñëè ðåáåíîê ðîäèëñÿ, IA ÷ èíàÿ ñ 37 íåäåëè।
æ àøøñîîå èäååååèååèåèåèåååå ñññññññññññññññññññññ Ð æ òòòòòòòòòòò33--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3-- Ïðèñòóïèòü ई ðàáîòå ãîòîâû ANA ñèñòåìû îðãàíèçìà ìàëûøà, òàêæå ïðîèñõîäèò ðàçâèòèå ãîðìîíà êîðòèçîíà, êîòîðûé ñïîñîáñòâóåò äîçðåâàíèþ ëåãêèõ, एक êèøå ÷ íèêå ìàëþòêè ïðîèñõîäèò ñêîïëåíèå íåáîëüøîãî êîëè ÷ åñòâà ìåêîíèÿ (ïåðâûé êàë), एक ãîëîâà ई æèâîò â îêðóæíîñòè óæå ïðèìåðíî îäèíàêîâû।
IA òðèäöàòü ñåäüìîé íåäåëå áåðåìåííîñòè Aan ìàëûøà ñîñòàâëÿåò 2,8 -2,9 ea, एक डिनो â ýòîò ïåðèîä ïðèìåðíî 48-50 नी, OI åñòü टीएए ïàðàìåòðû óæå òàêèå, êàê ANA ïðèâûêëè âèäåòü ïîñëå ðîæäåíèÿ ðåáåíêà।
îðãàíèçìå ðåáåíêà ïðîäîëæàåòñÿ ïðîöåññ ðàçâèòèÿ, çàùèòíîé îáîëî ÷ आएको इ ïîêðûâàþòñÿ ANA íåðâû, äëèòüñÿ ýòî áóäåò ई ïîñëå ðîæäåíèÿ â OA ÷ åíèè ïåðâîãî ãîäà æèçíè, òàêæå òâåðäåþò õðÿùèêè íîñèêà ई óøåé। Â ýòîò ïåðèîä âîëîñèêè ìàëûøà äîðàñòàþò AI 0,5 -4नी, äîëæåí एन ÷ åçíóòü ëàíóãî (ïóøîê IA òåëüöå), एक ïåðâîðîäíàÿ ñìàçêà ìîæåò ðàñïðåäåëÿòüñÿ êàê द्वितीय âñåìó òåëüöó ðåáåíêà, òàê ई ìîæåò îñòàâàòüñÿ òîëüêî â ñêëàäî ÷ EAO।
Ïðèçíàêè áëèçêèõ ðîäîâ ìîãóò âîçíèêíóòü IA òðèäöàòü ñåäüìîé íåäåëå áåðåìåííîñòè, ïðîèñõîäèò âûõîä ñëèçèñòîé ïðîáêè (æåëòîâàòûå âûäåëåíèÿ ñ ïðîæèëêàìè), íàáëþäàåòñÿ îïóñêàíèå æèâîòà (ìëàäåíåö ïîøåë IA âûõîä) ई ìîæåò áûòü íåçíà ÷ èòåëüíîå ðàçæèæåíèå ñòóëà।
íòîõõõõõõõõõõìììììêìììììêêìêêêììììììììììììììììììì - - - - - -ì - - - - -ìì - - -ìì - - - - --ììì - - - - - - - - - - - - - - - --ìììì - - - - - - - - - - - - - - - - - --ìììììì - - - - - - - - - - - - - Òò àóàóàóàóàóààààààòòààòòò òòìì âòò-1 âò ñ ñ ñ ïêà। Òàêæå IA द्वितीय ÷ åâîé ïóçûðü óâåëè ÷ èâàåòñÿ äàâëåíèå, ìîæåò âîçíèêàòü ñòðåëÿþùàÿ áîëü â ïðîìåæíîñòè ई íîãàõ, íåñêîëüêî डैक â äåíü çàòâåðäåâàåò æèâîò ई ëîìèò ñïèíó।
Ñòàðååò ïëàöåíòà, ðîëü êîòîðîé ñêîðî ñîéäåò IA íåò, ïîñëå ðîæäåíèÿ ìàëûøà, "ðîäèòñÿ" IIa âñëåä CA आईईआई, çàòåì àêóøåðêè êîíñòàòèðóþò âûõîä äåòñêîãî ìåñòà, òåïåðü â îðãàíèçìå ìàòåðè अर्थात् ÷ टीएए ëèøíåãî IA îñòàëîñü ई, सीआईए ÷ k èäääääóóóóóóóóóó
IA 37 íåäåëå ðàçâèòèÿ áåðåìåííîñòè íåêîòîðûå æåíùèíû हे ñåáÿ ìîãóò çàìåòèòü æåëòîâàòûå Eee, îíè ìîãóò áûòü ñ ïðèìåñÿìè EC ïðîæèëîê êðîâè, द्वितीय êîíñèñòåíöèè âûäåëåíèÿ íàïîìèíàþò òÿãó ÷ oth ñìåñü। Äëÿ òðèäöàòü ñåäüìîé íåäåëè áåðåìåííîñòè õàðàêòåðíû ðîçîâàòî-æåëòîâàòîãî öâåòà âûäåëåíèÿ ई ìóòíîâàòîãî îòòåíêà ñëèçü, ýòî ANA ÿâëÿåòñÿ ïåðâûìè ïðèçíàêàìè âûõîäà ñëèçèñòîé ïðîáêè, ïðåãðàæäàþùåé âõîä â øåéêó ìàòêè।
पीडादायी मूर्ख वा तेज सिन्ड्रोम, महिलाका सबै आन्तरिक अ arge ्गहरू दुईको लागि काम गर्न थाल्छ। किडनी लक्षणहरूले विशेष गरी मूर्त लोड महसुस गर्छन्। घर किडनीले गर्भावस्थाको गर्भाविकलाई मृतकलाई चोट पुर्याउँछ। गर्भावस्थाको बेला पवित्र मृग। धेरै वर्षका लागि मिर्गौलालाई निको पार्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ?
अब म केनेफ्रोन पिउँदछु। Peach 37 हप्ता गर्भावस्थाको लागि गर्भावस्था को सक्रिय तयारीको अवधि। यस हप्ताको सुरूमा, फलहरू डड गरिएको मानिन्छ:
अंगहरू गठन गरिएको छ र पूर्ण रूपमा संचालित गरिएको छ। बच्चा संसारमा देखा पर्न तयार छ, पछि विशेषज्ञले आवश्यक नियुक्तिहरू गर्नेछ। गर्भावस्थामा मिर्गौलाहरूमा कपिबहरूको रोकथाम। गर्भावस्थाको बखत एक महिलाको लागि, मृगौला पीडा र अप्रिय भावनाहरू श्रोताहरूको लागि अप्ठ्यारो भावनाहरू बढी देखा पर्यो। डाक्टरले दुई जना बच्चालाई आफ्नो हातमा राख्नेछन् भन्न डराउँछन्। शब्दको अन्त्यमा आउन। मुख्य कुरा भनेको गर्भावस्थामा किन चोट पुर्याउँछ?
लक्षणहरू। गर्भावस्था अवधि - आवास आवास jue7 हप्ता गर्भावस्था - प्रभाव, महिलाका सबै आन्तरिक अ arge ्गहरू दुईको लागि काम गर्न थाल्छन्। विशेष गरी मूबिल लोडले मिर्गौला, डिसेम्बर 1 , 2012 21 12 दृष्टिकोण। केटीहरू, 11:
55 55। के गर्ने यदि मिर्गौला गर्भावस्थामा चोट पुर्यायो भने। पेट वा कमब्याक मा एक महिला स्थानीयकरणको शरीरमा;
गर्भावस्था हप्ता - कति महिनाहरू छन्?
जब 37 37 हप्ता गर्भावस्थाको texts0 हप्ता कुनै पनि गर्भवती महिलाले उत्तर दिन सकिन्छ। यसको लागि, जटिल गणितीय गणनाहरू पूरा गर्न आवश्यक छैन। तपाईंले थाहा पाउनु पर्ने मात्र कुरा भनेको हडबडेट्रिक हप्तामा गर्भावस्थाको सही शब्द हो। उसको भविष्यका आमाले हरेक भ्रमणको साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ रिपोर्ट गर्छन्।
हप्तामा हप्तामा अनुवाद गर्नको लागि, तिनीहरूको नम्बरलाई विभाजित गर्न आवश्यक छ। परिणामस्वरूप ओभरस्ट्लाइ महिनाहरूको संख्या हो। यो बाहिरतिर फर्कन्छ कि गर्भावस्थाको pebts 37 हप्ता months महिना र 1 हप्ता हो। यो नवौं अट्टेलिक महिनाको प्राय: सुरूवात हो, तर बच्चाको जन्म पहिले नै सम्भव छ। त्यहि समयमा, नवजात शिशुलाई मार्न सकिन्छ।
गर्भावस्था को गर्भावस्था - बच्चालाई के हुन्छ?
यस सर्तको बारेमा 37 37 वर्तन गर्भावस्थाको भएको छ, जुन भविष्यको बच्चासँग भइरहेको छ, ती डाक्टरहरूले ती व्यक्तिहरूको उपस्थितिका लागि पूर्ण रूपमा ध्यान दिए। फलहरू पूर्ण अस्तित्वको लागि पूर्ण रूपमा तयार छ, त्यसैले स्वास्थ्यको लागि नडराउनुहोस्। गर्भाशय गुहामा निःशुल्क ठाउँको अभावका कारण, बच्चाले व्यावहारिक रूपमा चलिरहेको गतिविधि देखाउँदैन, जसले आमालाई डराउँछ। डाक्टरहरूले भनेका छन् कि सामान्य दायरा भित्र सबै, र आमालाई आफ्नो राम्ररी मनसाय र उपस्थिति अनुगमन गर्न सल्लाह दिनुहोस्।
गर्भावस्थाको अवधिमा वृद्धिको साथ भविष्यमा तौलमा पनि वृद्धि भएको छ। पोषक तत्वहरू आफ्नो शरीर प्रवेश गर्न छोडेन र जब peetings 37 हप्ता गर्भावस्था हुन्छ, पक्षपाती रूपमा ऊतकहरूमा जम्मा र शरीरको वजन बढाउँदै। स्थापित मापदण्डका अनुसार गर्भावस्थाको petter 37 वर्तमानमा भ्रुणको सामान्य वजन लगभग 000000 g हुनुपर्दछ। प्रत्येक दिन फल 1 14
को लागी कडा हुन्छ:
शारीरिक विकास को कम महत्वपूर्ण सूचक शरीरको लम्बाई हो। यस समयमा यो cm 48 सेन्टीमिटर पुग्छ। यो ध्यान दिँदै छ कि यी मानहरू अधिक परिचित छन्। प्रत्येक बच्चा व्यक्तिगत छ, त्यसैले बच्चाहरूको विकासको गति पनि भिन्न हुन सक्छ। अल्ट्रासाउन्डमा भन्नुभएको भन्दा फरक व्यक्तिहरू भन्दा फरक व्यक्तिहरू भन्दा फरक छन् यदि नामहरू सम्झना हुँदैन भने शारीरिक विकास सूचकहरूको उद्देश्य निर्धारण गर्न सकिन्छ, यदि नाम अल्ट्रासाउन्डमा भनिएको भन्दा फरक छ भने।
subthutey फ्याट फाइबर प्रति दिन 1 14 g को गतिमा जमातेर, र मस्तिष्कका केही तहहरू क्रम्सको जन्म बढ्न थाल्छन्। क्रम्ब्सको अनुहारको सुविधाहरू पहिले नै गठन भइसकेका छन्, र हड्डी प्रणालीको थप सुदृढ छ।
यदि तपाईं एक ओबुटिक विधि प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, 37 37 हप्ता सुरु भएको, म्यामनाइड्सको गर्भावस्था भनेको अन्तिम दशक महिनाको सीमा होइन। व्याकुलको विपरित। केवल months महिनाको चाखलाग्दोतामा महिलाको रोकथामको विपरित, हामी नोट गर्दछौं कि यो अलि बढी रहन्छ - करीव 400 हप्ताहरू। र सबै किनभने औषधीय स्टुअर्स अवधारणाको क्षणको लागि मृत छन् (उदाहरणका लागि अण्डाको मर्जर हो, जुन ओभीरशिटको परिणाम स्वरूप देखा पर्यो, र अन्तिम मासिक धर्मको पहिलो दिनबाट।
मात्राको समाचारको सामग्री को सामग्री: khretrete को जीव को लागी अब जन्म डरलाग्दो छैन। बच्चा पूर्ण रूपमा आत्म-जीवन खाना पकाउँदैछ, समयपूर्वको मामलामा तपाई यसको सुरक्षादेखि डराउन सक्नुहुन्न। बरालक्सलेसो सेमिनका ठाउँहरू अझै पनि गर्भावस्थाको year 37 वर्तमान गर्भावस्थाको 37 37 वर्षमा गर्भावस्थाको प्रमुखले उनलाई उदार मार्गहरूतर्फ फर्काए।
स्पष्ट रूपमा पेटको खण्डन। एक रातीको दीक्षा भविष्य मामभिड्रगले सोच्दछ कि एम्ब्कासँग गर्भाशय हुन्छ। टूमी, एक पटक छाती मुनि अवस्थित अवस्थित, अब नाव क्षेत्रमा कम भयो। यो टोल्कोमामा मात्र नभई यसको प्रियजनको लागि मात्र ध्यान दिनुहोस्। / LI> <
Harbings बच्चा जन्माउने शर्बिंगर
विचार गर्दै कि त्यहाँ गर्भावस्थाको 37 37 ओबस्टेन्डर हप्ता छ र बच्चा जन्मको लागि तयार छ, यसको शरीरमा हुने महसुस हुन्छ। यदि हामी सामान्य स्वास्थ्य संग भन्छौं, यो महत्त्वपूर्ण सान्दर्भिक छ।
गर्भावस्थाको नवौं महिनाको सुरूमा, औसत माथीको वजन लगभग दुई र तीन किलोग्राम हो, र बृद्धि447--48 सेन्टीमिटर छ। ह्याचिंग अवधिको अन्त्य, तौल तीन तीन किलोग्राम, वृद्धि बढ्छ - -0--52 सेन्टीमिटसम्म, एकै समयमा, केटीहरू प्राय: लघु केटाहरू हुन्छन्।
गर्भावस्थाको नवौं महिनामा, बच्चा जन्म कुनै पनि समयमा सुरू गर्न सकिन्छ। 370 हप्ता देखि शुरू, बच्चा समयपूर्व मानिन्छ - यो संसारको उदयको लागि पूर्ण रूपमा तयार छ। कहिलेकाँही weeks0 हप्ता गर्भावस्था अवधिको अन्त्य हुँदैन - बच्चा जन्माउने 411 मा सुरू हुन्छ, र 422 हप्तामा।
ALLLSSWEND DEWSWANE मा गर्भावस्थाको नवौं महिनामा कसरी गर्छ?
<< p> यस अवधिलाई प्राय: बुझ्ने क्रममा गरिन्छ, कुन स्थिति बच्चा हो, कुनै सौन्दर्य र अन्य यात्रीहरू जुन बच्चाको जन्म को प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्दैन। पेटको भित्ताबाट अल्ट्रासाउन्ड परीक्षाहरू, त्यो पार, ट्रान्समोडमोम्पसंहार हो।
गर्भावस्था हप्तामा अल्ट्रासाउन्डर
गर्भावस्थाको 37 37 हप्तामा, बच्चाको वृद्धिको औसत 47 47--4848 सेन्टीमिटर हुन्छ, र तौल 200 200-2800 ग्राम हुन्छ। फोक्सोमा पर्याप्त विशेष पदार्थ पहिले नै जम्मा गरिएको छ - एक सर्फलन्टल ताकि बच्चाले आफ्नो पहिलो सास फेर्छ। तसर्थ, यदि बच्चा गर्भावस्थाको नौौं महिनाको सुरूमा जन्मेको हुन्छ भने, यो अभिभावक जीव भन्दा बाहिर अस्तित्वको लागि सक्षम छ।
<< p> यस पटक, बच्चा 48 48--49 सेन्टीमिट हुँदै जान्छ, र यसको वजन22800-290000 सम्म बढ्छ। जे होस्, गर्भावस्थाको अन्त्यमा व्यक्तिगत परिवर्तनशीलता धेरै उच्च छ। आन्द्रामा, बच्चाले पहिलो कल - मेकोनियालाई जम्मा गरेको थियो जुन जीवनको पहिलो केही दिनहरूको लागि प्रकाशित हुनेछ। सामान्यतया, बच्चा जन्मको लागि तयार छ।
<< p> यस समयमा, बच्चाको औसत उचाई 49--500 सेन्टीमिटर हो, र तौल200 00--3100 हुन्छ। बच्चाको टाउको श्रोणि क्षेत्रमा खस्न सक्छ। एक पाचन प्रणाली माझी दूध पचाउन को लागी तयार छ, तर ब्याक्टेरियाहरु द्वारा अझै आन्तरिक छैन - यो प्रक्रिया पहिलो पाइप sips को साथ शुरू हुनेछ। एड्रेनल ग्रंथिहरू बढ्छ र मृगको मिर्गौला भन्दा बढी, ताकि श्रमको समयमा, बच्चाको रगतमा ठूलो आराधनालाई कम गर्न मद्दत गर्दछ - यसले उसलाई यो कठिन अवधिबाट बच्न मद्दत गर्दछ।
गर्भावस्थाको th 37 औं दिनमा, तपाईंको शरीरले बच्चा जन्माउने दृष्टिकोणको बारेमा संकेत गर्न सक्दछ, र यदि गर्भावस्था यो हप्ता यस हप्ता उसको उपस्थिति हुन सक्छ कि बच्चा यस संसारमा उनको उपस्थिति हुन सक्छ कि बच्चा यस हप्ता उनको उपस्थिति हुन सक्छ कि बच्चा आफ्नो उपस्थिति यस हप्ता मा आफ्नो उपस्थिति हुन सक्छ। यद्यपि आफ्ना भावनाहरूप्रति सावधान रहनुहोस्, याद गर्नुहोस् कि बच्चा जन्माउने, अहिले र -5- weeks हप्तामा दुबै। मुख्य कुरा शान्त र खुशी रहनु हो, र बच्चाले मेरो जन्मदिनको लागि छनौट गर्न दिनुहोस्।
बेबी 35 35 हप्ता भयो। यसको तौल 2.9 kg किलोग्राम र द्रुत रूपमा हुर्कन्छ। बच्चाको बृद्धि 1 सेन्टीमिटर 1 सेन्टीमिटर बढ्दछ र अहिलेको खुट्टाको माथिको खुट्टा र 35 35 सेन्टीमिटबाट टेलबोनसम्म cm 47 सेन्टीमिटर बराबर छ।
बच्चाले बच्चालाई सुरू गर्दछ, यो उहाँ हुनुहुन्छ जसले आफैंलाई यस संसारमा र सबै आमा भन्दा माथि देखाउन समय पाउनुहुन्छ भनेर जान्नुहुन्छ। इच्छित बैठकको लागि तयार रहनुहोस् र उही समयमा बच्चालाई सताउँदैन, सबै कुरा समयमै हुन्छ।
तर यो कुरा जे भए पनि, बच्चा गुमाउँदैन - उहाँ तौल लिन र बढ्नुहुन्छ। बच्चा फ्याट स्टोर गर्न जारी छ (लगभग 300 जी दिन)। बच्चाको दुध बिस्तारै निस्कन्छ बच्चा जन्माइसकेपछि, त्यसैले बच्चा स्टक टिश्यूको लागि पर्खन्छ र पाउनको लागि पर्याप्त शक्ति हुन्छ।
बच्चाको जीवनको पहिलो वर्षमा यो रहनेछ र बच्चाको आन्दोलनको समन्वयको सर्वश्रेष्ठ विकासलाई मद्दत पुर्याउँछ।
त्यहाँ पर्याप्त लुब्रिकेसन, र लान्गागा, र बच्चाको शरीरलाई ढाकिएको बन्दुक बिस्तारै गायब हुन्छ।
श्वासप्रश्वास प्रणाली सुधार गरिएको छ। बच्चा सक्रिय रूपमा फोक्सोको ट्रेन गर्दछ - श्वासप्रश्वासको चाल, सास फेर्ने र थकित ज्वालामुखीको तरल पदार्थ बनाउँदछ। हर्मोन कोर्सान जसले फोक्सोको पाकेको पाइपमा योगदान पुर्याएको छ ताकि नवजातले बच्चालाई पनि सास फेर्न सक्छ! फोक्सोमा सर्फरनमा सक्रिय रूपमा उत्पादन गरिन्छ।